Phupha ngePatomime Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Nabani na olivayo igama elithi "pantomime" kusenokwenzeka ukuba entlokweni yakhe unomfanekiso wegcisa elisesitalatweni elinxibe izithambiso ezimnyama namhlophe kwaye liqhula nabantu abadlulayo.
Nangona kunjalo, olu bizo alubhekiseli kuphela kubazobi abenza umdlalo wezimbo zomzimba. Igama elithi pantomime likwasetyenziselwa ukubiza ubugcisa bokwenza apho amagcisa ahlala khona ngaphandle kwelizwi elithethiweyo.
Kwi-pantomime, izinto, iindawo, izigcawu, kunye nabalinganiswa zenziwa ukuba ziqondakale kuphela ebusweni nakwizimbo zomzimba zamagcisa. Kule meko, iimaski okanye iimaski zokuzilungisa zinokusetyenziswa.
1 Uphawu lwephupha «i-pantomime» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-pantomime» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-pantomime» -ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-pantomime» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umfanekiso wephupha "lepomomime" unokusetyenziswa ikakhulu njengesalathiso amaxesha olonwabo ukuba iqondwe. Amaxesha ngamaxesha, iinkumbulo zobuntwana obonwabileyo zifihliwe emva kwakhe. Umphuphi kufuneka ayikhumbule le nto. Ngamanye amaxesha, isimboli yephupha "ye-pantomime" inokuqulatha isilumkiso sabantu abakhohlisayo el mundo vuka. Ke ngoko, umphuphi kufuneka alumke.
Ukuba umntu uziva ukuba umdlalo wezandla ephupheni uyonwabisa, umntu unokufihla kwakhona ukubhekisa kwiimpawu zomntu, yeyiphi uburharha kunye nokuzenzekelayo. Ukuba elinye lamagcisa otshintsho olukhawulezileyo alusizi ngokwaneleyo, iphupha eli lihlala lijamelene nokudana.
Ukuba umntu oleleyo uthatha inxaxheba kumdlalo wobuso, mhlawumbi kwindawo yemidlalo yeqonga, ishishini lakhe aliyi kukhula ngendlela efunwa ngayo. Awuyi kwaneliswa ziziphumo ozifumeneyo. Ukuba ubona ukulinganisa esitratweni ephupheni lakho, akufuneki uthathwe ngabanye abantu ngokwakho. Indlela yobomi Yekela ihambe.
Ukutolikwa kwephupha ngokubanzi, izijekulo zomzimba zepatomime okanye izijekulo ephupheni nazo zinokuba nomdla. Kuba ezi zihlala zinentsingiselo efanayo nokuvuka ebomini kwaye ziphinde zikrwele umgca umyalezo wephupha.
Uphawu lwephupha «i-pantomime» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni kutolika i-pantomime ephupheni, ngakumbi ukuba ibonwa eqongeni, ngengqiqo yokuba inguye ngqalelo ufuna ukwalathisa iphupha kwinto ekufuneka ecinge ngayo. Ithetha ngantoni ngokubanzi inokufundwa kwimbonakalo yobuso kunye nezimbo zomzimba.
Ukuba umphuphi ngokwakhe liphupha ephupheni, oku kungabonakalisa umnqweno wokubonisa abanye oko ukuko. Umntu ekuthethwa ngaye ufuna ukuba kunye nabanye kwihlabathi lokuvuka. Iitalente yenze icace ukuba zeziphi ongakhange uziqonde ukuza kuthi ga ngoku. Ke ngoko, kule meko yamaphupha, isigqibo bonisa umntu oleleyo.
Kutoliko lwengqondo lomfanekiso wephupha, ubuso beemime kufuneka buqwalaselwe ngokusondeleyo. Ukuba wayenxibe imaski ngelixa edlala ngezimbo zomzimba, umphuphi kwihlabathi elivukayo kufuneka aqonde ukuba uzifihlile iitalente zakhe zokwenyani. Ukuba ukulinganisa kuyilwe ephupheni, ufuna ukuba ubuthathaka bomlinganiswa wakho bubonwe ngcono.
Ukuba umntu uhleka ephupheni malunga ne-clown ethe cwaka, unokuziva kwihlabathi lokuvuka ukungazithembi kwiimeko ezithile. Unoluvo lokuba awunakuthetha nto kakuhle kwaye ke uhlala uthe cwaka. Unobangela woku kunokuba kukuthintelwa kwindawo yokunxibelelana.
Uphawu lwephupha «i-pantomime» -ukutolika kokomoya
Ukusuka kwindawo yokomoya, "ipatomime" isimboli yamaphupha iveza umfanekiso ongeyonyani womfanekiso wawo. Ingqondo yobomi. Umphuphi kufuneka ajongane nesi simo sengqondo.